အသုံးပြုသူများ Pinterest နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဘယ်လို Martech Zone
အသုံးပြုသူများ Pinterest နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဘယ်လို
သောကြာနေ့, ဖေဖေါ်ဝါရီလ 22, 2013 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 4, 2017 Douglas Karr
ယခုအပတ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ဒေသဆိုင်ရာတီထွင်ဖန်တီးသူများနှင့်စကားပြောသောအဖွဲ့တွင်ပါဝင်ရန်ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရသည် (အသံကဒီမှာပါနှင့်အတူတစ် ဦး meetup ၌တည်၏ ပုံစံမဂ္ဂဇင်း။ အခြားအုပ်စုများထက် ပို၍ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ တီထွင်ဖန်တီးသူများသည်အမြင်အာရုံဆိုင်ရာလူမှုကွန်ရက်များကို အသုံးချ၍ မယုံနိုင်လောက်သောအခွင့်အရေးရှိသည် စပျစ်ပင်, Instagram ကို or Pinterest.
ဤ အမြင်အာရုံလမ်းညွှန်အသေးစိတ်ကို Pinterest မှအသုံးပြုသူများသည် pin များ၊ ပျဉ်ပြားများ၊ အခြားအသုံးပြုသူများနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်မည်သို့ဆက်ဆံနေကြသည်။ မှ Wishpond
Pinterest ရဲ့အစောပိုင်းကိန်းဂဏန်းတွေကလက်မှုပညာရှင်တွေ၊ အနုပညာရှင်တွေ၊ ငါတို့စတင်သောအခါသို့သော် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Infographic ဘုတ်အဖွဲ့, ငါတို့ခဲ့ကြသည်များနှင့်ငါတို့ရရှိရန်ဆက်လက်ကြီးမြတ်အသွားအလာကိုအံ့အားသင့်ဖြစ်ကြသည်။ Pinterest ဟာအစွမ်းထက်တဲ့အမြင်အာရုံပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူတစ်ယောက်သည်သင်၏မျက်လုံးကိုဖမ်းယူသည်အထိရာနှင့်ချီသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Tags: အပြန်အလှန်ပြုမူမှုPinterest သြဇာသက်ရောက်သည်Pinterestpinterest စာရင်းဇယားများ
26:2013 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 2, 51 တွင်
ငါ info- ဂရပ်ဖစ်များအတွက် sucker ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်းမှစတင်ရန်ချင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်တန်းငါဒီဖတ်ပါလိမ့်မယ်!
ငါ Pintrest ကိုငါကြိုက်တယ်၊ အမျိုးသမီးကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ငါအချိန်အတော်အတန်“ pinning” ကိုသုံးတယ်။ လူထုဆက်ဆံရေးနှင့်ကြော်ငြာကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်စားသုံးသူအပြုအမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည့် Pintrest ၏အခန်းကဏ္ about နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်မ ၀ င်စားပါ။ Pintrest လိုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဟာအခမဲ့ကြော်ငြာရဖို့တောက်ပတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုလို့ထင်တယ်။ လူမှုရေးမီဒီယာများနှင့် ပတ်သတ်၍ လူများ၏အသက်တာတွင်ကြော်ငြာခြင်းနှင့်လူသိရှင်ကြားကြေငြာခြင်းများကိုတီထွင်ရန်နည်းလမ်းများစွာသည်အနာဂတ်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။